Ndị Rom 15 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Akwụkwọ Ozi E Degaara Ndị Rom 15:1-33
Na-anabatanụ ibe unu otú Kraịst nabatara unu (1-13)
Pọl na-ejere mba dị iche iche ozi (14-21)
Ebe ndị Pọl chọrọ ịga (22-33)
15 Ma, anyị ndị siri ike n’okwukwe kwesịrị ịna-enyere ndị okwukwe ha na-esighị ike aka,+ ọ bụghị ịna-eme ihe ndị ga-amasị anyịnwa.+ 2 Ka onye ọ bụla n’ime anyị na-eme ihe na-amasị onye agbata obi ya ma na-emere ya ihe dị mma, ka e wee gbaa ya ume.+ 3 N’ihi na Kraịst emeghịdị ihe masịrị ya,+ kama e dere banyere ya, sị: “Ọ bụ m ka ndị na-akparị gị kparịrị.”+ 4 N’ihi na e dere ihe niile e dere n’oge gara aga ka e jiri ha kụziere anyị ihe,+ ka obi anyị na-atachi+ na nkasi obi anyị na-enweta n’Akwụkwọ Nsọ wee mee ka anyị nwee olileanya.+ 5 Ka Chineke onye na-eme ka anyị tachie obi na onye na-akasi anyị obi mee ka unu na-eche echiche ka Kraịst Jizọs, 6 ka unu wee jiri otu obi+ na otu olu* na-enye Chineke na Nna Onyenwe anyị Jizọs Kraịst otuto. 7 N’ihi ya, na-anabatanụ ibe unu+ otú Kraịst nabatara unu,+ ka e wee nye Chineke otuto. 8 N’ihi na ana m agwa unu na Kraịst ghọrọ onye na-ejere ndị e biri úgwù ozi+ iji gosi na Chineke na-ekwu eziokwu, ka o wee gosi na nkwa niile Chineke kwere ndị nna nna ha bụ eziokwu+ 9 nakwa ka ndị mba ọzọ wee nye Chineke otuto n’ihi ebere ya.+ Otú ahụ ka e dere ya, sị: “Ọ bụ ya mere m ga-eji nọrọ ná mba dị iche iche too gị, m ga-abụkwa abụ iji too aha gị.”+ 10 E dekwara, sị: “Unu mba niile, soronụ ndị ya ṅụrịa ọṅụ.”+ 11 Ebe ọzọ n’Akwụkwọ Nsọ sịkwara: “Mba niile, toonụ Jehova,* ka mmadụ niile tookwa ya.”+ 12 Aịzaya sịkwara: “A ga-enwe onye ga-esi n’ezinụlọ* Jesi.+ Ọ ga-achịkwa mba dị iche iche.+ Mba dị iche iche ga-enwe olileanya na ya.”+ 13 Ka Chineke onye na-eme ka anyị nwee olileanya mee ka unu nwee ọṅụ na udo zuru ezu ebe ọ bụ na unu tụkwasịrị ya obi, ka ike mmụọ nsọ wee mee ka unu nwee olileanya.+ 14 Ụmụnna m, obi siri m ike na unu na-eme ihe dị mma mgbe niile, mara ihe niile unu kwesịrị ịma, nakwa na unu na-adụli ibe unu ọdụ.* 15 Ma, e nwere ihe ụfọdụ m gwara unu hoo haa banyere ha n’akwụkwọ ozi a, ka m wee chetara unu ihe ndị ahụ ọzọ maka na Chineke meere m amara 16 ka m wee bụrụ onye ozi Kraịst Jizọs ma na-ejere mba dị iche iche ozi.+ Ana m arụ ọrụ dị nsọ nke bụ́ ikwusa ozi ọma banyere Chineke,+ ka mba ndị a wee bụrụ àjà ga-adị Chineke mma, nke e ji mmụọ nsọ mee ka ọ dị nsọ. 17 N’ihi ya, ebe m bụ onye na-eso ụzọ Kraịst Jizọs, e nwere ihe mere m ga-eji na-aṅụrị ọṅụ n’ihi ozi m na-ejere Chineke. 18 N’ihi na agaghị m anwa anwa kwuo ihe ọ bụla ma ọ́ bụghị gbasara ihe Kraịst si n’aka m rụọ ka mba dị iche iche wee rubere ya isi. O si n’ihe ndị m kwuru na ihe ndị m mere rụọ ha, 19 jirikwa ọrụ ebube na ihe ịtụnanya+ nakwa ike mmụọ nsọ Chineke rụọ ha. Ọ bụ ya mere m ji nwee ike ikwusa ozi ọma banyere Kraịst nke ọma malite na Jeruselem ma gazuo Ilirikọm.+ 20 N’eziokwu, m si otú a gbaa mbọ ka m ghara izisa ozi ọma n’ebe e merela ka a mata aha Kraịst, ka m ghara ịrụwa ọrụ onye ọzọ maliterela.* 21 Kama m mere ihe dabara n’ihe e dere n’Akwụkwọ Nsọ, sị: “Ndị na-anụghị ihe ọ bụla gbasara ya ga-ahụ ụzọ, ndị na-anụbeghịkwa ga-aghọta.”+ 22 Ọ bụkwa ya mere na abịabeghị m na nke unu n’agbanyeghị na e nweela ọtụtụ ugboro m chọrọ ịbịa. 23 Ma ugbu a, ekwusaala m ozi ọma n’ebe niile n’ógbè ndị a. Ọ na-agụkwa m agụụ kemgbe ọtụtụ afọ* ịbịa na nke unu. 24 N’ihi ya, enwere m olileanya na m ga-abata hụ unu ma m gawa Spen. M nwekwara olileanya na unu ga-edupụtụ m ma mụ na unu nọrịtụchaa. 25 Ma ugbu a, achọwala m ịga Jeruselem ka m gaa jeere ndị nsọ ozi.+ 26 N’ihi na obi dị ndị nọ na Masedonia na Akeya ụtọ isi n’ihe ndị ha nwere tụkọta ihe a ga-enye ndị dara ogbenye n’ime ndị nsọ nọ na Jeruselem.+ 27 N’eziokwu, obi dị ha ụtọ ime otú ahụ. Ha jidị ha ụgwọ ime ya. N’ihi na ọ bụrụ na mba dị iche iche ritere uru n’ihe Chineke nyere ndị nsọ ahụ, ha jikwa ụgwọ iji ihe ndị ha nwere jeere ndị nsọ ozi.+ 28 N’ihi ya, mgbe m bugachara onyinye a* ma hụ na o ruola ha aka, m ga-abata na nke unu ma m gawa Spen. 29 Amakwa m na mgbe m ga-abịa na nke unu, m ga-ewetara unu ngọzi buru ibu si n’aka Kraịst. 30 Ụmụnna m, ebe ọ bụ na anyị nwere okwukwe n’Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, mmụọ nsọ emeekwa ka anyị hụ ibe anyị n’anya, m na-agba unu ume ka unu soro m na-arịọsi Chineke arịrịọ ike n’ekpere maka m,+ 31 ka a napụta m+ n’aka ndị nọ na Judia na-ekweghị na Jizọs nakwa ka ndị nsọ nabata ozi m ga-ejere ha na Jeruselem.+ 32 Ọ ga-eme ka m jiri ọṅụ bịakwute unu, anyị agbarịta ibe anyị ume, ma ọ bụrụ uche Chineke. 33 Ka Chineke onye na-eme ka anyị nwee udo* nọnyere unu niile.+ Amen.
^ Na Grik, “ọnụ.”
^ Na Grik, “ga-enwe mgbọrọgwụ.”
^ Ma ọ bụ “na-akụziri ibe unu ihe.”
^ Na Grik, “ịrụ ihe na ntọala onye ọzọ tọrọ.”
^ O nwere ike ịbụ, “afọ ole na ole.”
^ Na Grik, “mkpụrụ a.”
^ Na Grik, “Chineke nke udo.”